समकालीन राजनीतिका गाँठाहरुमाथि नागरिक मन्थन – Voice of Kathmandu
समकालीन राजनीतिका गाँठाहरुमाथि नागरिक मन्थन
– महादीप पोखरेल
नेपालको वर्तमान मुख्य समस्या के हो ? यसमा विभिन्न तर्कहरु हुन सक्छन । धेरैलाई लाग्दो हो कि भ्रष्टाचार मुख्य समस्या हो । अनि बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्ट नेता र कर्मचारी, काम नगर्ने ठेकेदार आदि त छँदैछन । यी विषयहरु नियन्त्रण हुनुपर्छ र देश अगाडि बढ्छ भन्ने चिन्तन पनि धेरैले लिएका छन । कतिपयले यो गणतन्त्र र संघीयता नै मुख्य समस्या हो, यो भन्दा राम्रो त राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै थियो, अब त्यतै फर्कनु पर्छ भन्ने स्वरहरु उराल्ने पनि गरेका छन।
Previous मुस्ताङ जाने पर्यटकका लागि बागलुङ आकर्षक गन्तव्य
Next सी जिनपिङ् विचारधारा र बिआरआईः के विश्व व्यवस्था बदलिँदैछ ?
59 mins ago भिओके